JEREMIA 8.4-22	F. 5, 6 | Fitandremana Ankadifotsy
JEREMIA 8.4-22	F. 5, 6
LAVITRY NY FAHENDRENA
Te-hampitafy ny olony amin’ny tena fahendrena Andriamanitra mba hiainany amin’ny fiainana ankasitrahany (Jakoba 1.5).
Fifikirana amin’ny fihodinana sy ny fitaka (4-9). Misisika ho amin’ny fahadalana hatrany nefa izy ireo ary tsy mety tonga saina. Miriotra tsy misaina izay alehany, toy ny soavaly hiady, mandrifatra amin’ny làlan-diso (6), mampiseho ny fahadalany ka ny vano sy ny domohina ary ny vanobe aza hendry noho izy satria mitandrina ny fotoana fihaviany (7). Mihevi-tena ho hendry satria manana ny lalàna (8). Mitory fahadalàna nefa ny fananana ny lalàna raha tsy misy ny fankatoavana izany.
Inona no fototr’izany fahadalana izany ? Mijery lavidavitra kokoa ny mpaminany ary mikaroka ny nahatonga izao fahadisoana rehetra izao (11-12). Tao ireo mpaminany sandoka, izay nandambolambo azy tamin’ny fampanantenana “fiadanana” sy fiononana amin’ny fiainana tsizarizary (12 ; jereo koa Matio 7.16-18).
Ny vokatry ny fahadalana. Ny fanilihana ny fahendrena avy amin’Andriamanitra dia nahatonga ny fahamainana ara-panahy. Manoatra noho izany ny tahotra ny famaizan’Andriamanitra, izay iniany todihana lamosina.
Fitarainan’i Jeremia (18-22). Izao no fiantombohan’izany. Malahelo Jeremia satria nahim-pon’i Joda ny niala avy teo ambany fiahian’Andriamanitra, tamin’ny alalan’ny fikomiany tamin’ny didin’i Jehovah. Teny mamy no hiantsoany azy ireo : “oloko zanakavavy” (19). Mahatsiaro torotoro, misaona ary mangorohoro izy, satria tsy hitany izay mety ho fanasitranana izao fahavoazana izao.
Hafatra : Ny fahendrena avy amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fahalalana sy fankatoavana ny teniny, dia haharo antsika amin’ny fahoriana maro !